नयाँ टेक कम्पनी सुरु गर्न अनुसरण गर्न Ste सजिलो चरणहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
Easy सजिलो चरणहरू नयाँ टेक कम्पनी सुरू गर्नका लागि
फेब्रुअरी 12, 2021 फेब्रुअरी 11, 2021 एम्मा विल्सन अरबी फ्रीलान्स, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, विशेष समाचार, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि
त्यहाँ टेक स्टार्टअप कम्पनीहरूका बिभिन्न प्रकारहरू छन्, र ती सबै बिभिन्न तरीकाबाट सुरू हुन्छन्।
अन्य संस्थापकहरूले कसरी उनीहरूको टेक स्टार्टअपहरू सुरू गरे, योजना बनाउँदै, र उचित कार्यान्वयन लामो आयुका लागि अविभाज्य थियो।
त्यहाँ एउटा प्रश्न छ धेरै उद्यमीहरू बारम्बार पाउँछन् - तपाईं कसरी सानो पूँजीको साथ नयाँ टेक कम्पनी सुरू गर्नुहुन्छ?
यस प्रश्नको उत्तर कठिन छ र तपाइँ सुरू गर्न चाहानुहुन्छ कम्पनीको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। तर तपाई उत्साहित हुनु भन्दा पहिले यो जान्नु आवश्यक छ कि नयाँ व्यवसायहरूको औसत बाँच्ने दर १० प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन। ठुलो 10 ० प्रतिशत स्टार्टअपहरू तिनीहरू कहिले परिपक्व हुन अघि नै बन्द हुन्छन्।
द्वारा छवि Pexels बाट pixabay.
यो प्रश्न begs, किन?
फेरि, तपाईले यस प्रश्नको कुनै सरल उत्तर भेट्टाउनुहुने छैन - यस अन्धकार तस्वीरका कारणहरू खराब समय देखि अपूर्ण व्यापार मोडेलहरूमा छन्। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, समस्याहरू धेरै छन्, र तपाईंलाई सुरुको चुनौतीहरूको असंख्य नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न सबै ज्ञान र समर्थनको आवश्यक पर्दछ।
तसर्थ, यो लेखले तपाइँको नयाँ टेक कम्पनीको लागि प्रक्षेपण, बजार, र विकास कायम गर्न पाँच सबैभन्दा प्रभावकारी चरणहरू समावेश गर्दछ।
१. तपाइँको मनसाय परिभाषित गर्नुहोस्
त्यहाँ टेक स्टार्टअप कम्पनीहरूका बिभिन्न प्रकारहरू छन्, र ती सबै बिभिन्न तरीकाबाट सुरू हुन्छन्। अन्य संस्थापकहरूले कसरी उनीहरूको टेक स्टार्टअपहरू सुरू गरे, योजना बनाउँदै, र उचित कार्यान्वयनले लामो जीवनको लागि अभिन्न हिस्सा राख्यो। तसर्थ, तपाईं पछाडि कदम, एक लामो सास लिनु, र ध्यानपूर्वक एक व्यापार शुरू गर्न को लागी तपाइँको मनसाय को बारे मा सोच्न आवश्यक छ। समय गाह्रो हुन सक्छ (र यो प्राय: हुन्छ), र यो प्रतिबद्धता र समर्पण लिन्छ जस्तो लाग्न नसकिने चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दा।
द्वारा छवि करोलीना ग्राबोवस्का बाट pixabay.
तपाइँको उद्देश्य र प्राविधिकमा उद्यमका लागि कारण केवल एक मात्र चीज हुन सक्छ जसले व्यापारलाई स्थिर राख्छ। यस बाहेक, तपाईंले कागजात, इजाजतपत्र, रेजिष्ट्रेसन, र तपाईंको राज्य वा देशको अन्य आवश्यकताहरूको बारेमा पनि सोच्न आवश्यक छ। तपाईंले सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ युके मा सर्वश्रेष्ठ-दर्ता कार्यालय ठेगाना प्रदायक, क्यानडा, वा अमेरिका, तपाईंको स्थान र ती देशहरूमा जुन तपाईंको व्यवसायले काम गर्दछ निर्भर गर्दछ।
२. तपाईको न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादन क्राफ्ट गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसायले के बेच्नेछ, र तपाईं कसरी पैसा कमाउनुहुनेछ? तपाईको ब्यापारको न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादन तपाईको बजार गर्न चाहने उत्पादनको अधिक प्राथमिक संस्करण हो। आदर्श रूपमा, MVP सँग सबै आवश्यक सुविधाहरू हुन आवश्यक छ समस्याको उचित समाधान गर्नको लागि तपाईंको व्यवसायले तपाईंको ग्राहकहरूको समाधान गर्ने छ।
तपाईंको उत्पादको यो संस्करण मूल्यवान छ किनकि तपाईं यसलाई तपाईंको ग्राहकहरू, उनीहरूको आवश्यकताहरू, र कसरी तपाईं समाप्त उत्पादन वा सेवा स्तरवृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे ठूलो कुरा सिक्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, तपाईले नवीनता, ईन्जिनियरिंग, र अन्य प्राविधिक पक्षहरू तपाइँको MVP शिल्प प्रयोग गर्न आवश्यक छ। र यो जहाँ प्राय नयाँ स्टार्टअपहरू डाउनहिल जान लाग्छ। तसर्थ, यो एक सफल व्यवसाय को लागी सडक मा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाउने।
Your. तपाइँको MVP प्रमाणित गर्नुहोस्
पहिले नै उल्लेख गरिएझैं तपाईंको MVP तपाईंको भावी ग्राहकहरूलाई कार्यात्मक र मूल्यवान उत्पादन प्रस्ताव गर्न खोजमा महत्वपूर्ण छ। यद्यपि यसमा समय र पैसा जस्ता अन्य स्रोतहरू लगानी गर्नु अघि तपाईंले यसलाई मान्य गर्नुपर्नेछ।
प्राथमिक, एक MVP दुई उद्देश्य पूरा गर्न अनिवार्य छ। यो एक विशिष्ट समस्या समाधान र ग्राहकहरूको जीवन सुधार गर्न पर्छ। र यी दुई कारकहरूले तपाईंको उत्पादको मूल्य प्रमाणित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तपाईं आफूलाई सोध्न चाहानुहुन्छ केहि आवश्यक प्रश्नहरू समावेश:
के म यो उत्पादन को लागी पर्याप्त ग्राहकहरु पाउन सक्छु?
के लगानीकर्ताहरूले सजिलैसँग यस उत्पादको विकास र मार्केटिंगलाई समर्थन गर्दछन्?
यस उत्पादनबाट मैले आफूलाई कत्ति धेरै फाइदा देखाउँछु?
के मेरो उत्पादन वर्तमान र भविष्यको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ?
Your. तपाईको प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण गर्नुहोस्
प्रतिस्पर्धाको उल्लेखमा, धेरै जसो उद्यमीहरूको पहिलो वृत्ति उन्मूलन हो। जे होस्, तपाईले सँधै ब्यापार प्रतियोगिता प्रति नकारात्मक महसुस गर्नुपर्दैन। तपाईंको ठाडो वा कोनाका भित्रका अन्य कम्पनीहरूले तपाईंको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् यदि तपाईं उनीहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने।
सर्वप्रथम, यदि तपाईं आफ्नो शिशु टेक कम्पनीको लागि कुनै प्रतिस्पर्धा फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले आफैलाई किन गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्छ? त्यो किनभने कडा प्रतिस्पर्धाको साथ एक ठूलो बजार आकार उच्च माग दर्साउँछ। दोस्रो, तपाईं तिनीहरूको गल्तीबाट पाठ सिक्न, तिनीहरूको कमजोरीहरूको शोषण गर्न, र उनीहरूको केही युक्तिहरूको अनुकरण गर्न तिनीहरूको रणनीतिहरू विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
द्वारा छवि स्टार्टअपस्टक फोटोहरू बाट pixabay.
Right. सहि समुह निर्माण गर्नुहोस्
Pixabay बाट स्टार्टअपस्टक फोटो द्वारा छवि
व्यापार सफलताको सब भन्दा नदेखी रहेका शर्तहरु मध्ये एक एक ठूलो टोली हो। र यो सही पाउनको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। तपाईंले पहिले सही व्यक्तिहरू फेला पार्न आवश्यक छ, उनीहरूलाई योग्यको तिर्न तिर्न, र तिनीहरू उत्पादक रहन निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको व्यवसायको तीन मौलिक क्षेत्रहरूलाई सही व्यक्तिहरू आवश्यक छन्, जस्तै सञ्चालन, मार्केटि,, र लेखा।
प्रविधि व्यवसायका लागि, भाडामा लिनु अझ जटिल छ। प्रतिभाशाली विकासकर्ताहरूको अभाव बाहेक, तपाईं उच्च ज्यालामा हेर्नुहुनेछ। एक नयाँ कम्पनी सजीलो प्रविधी रोजगार बजार मा सबै भन्दा राम्रो मान्छे किन्न सक्दैन। र यसले नयाँ कम्पनीहरूका लागि भाडा लिन धेरै चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ।
यदि तपाईंले नयाँ प्राविधिक कम्पनी शुरू गर्न गम्भीरताका साथ विचार गर्नुभयो भने, यसभन्दा राम्रो प्रक्षेपण समय अब ​​कहिँ हुने छैन। जे होस्, तपाई सायद सचेत हुनुहुन्छ कि यो सफलताको लागि लामो र चुनौतीपूर्ण मार्ग हो। सबै चलिरहेका भागहरूसँग जुन तपाईंको कम्पनीले लाभदायक बन्नु अघि काम गर्न आवश्यक छ, तपाईं सबै कागजको काम गरेर दायाँ खुट्टाको साथ सुरू गर्न चाहानुहुन्छ।
कार्यालय ठेगानाहरू र त्यस्ता अन्य मामिला विवरणहरू बेवास्ता गर्न सजिलो छ, तपाईंको नयाँ व्यवसायको नोक्सानमा। फलस्वरूप, यी पाँच चरणहरूमा तपाईंले सबै माइलस्टोनहरू जोड्नु हुन्छ तपाईंले खोज्नु पर्छ यो सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईंको स्टार्टअप १० प्रतिशतको हिस्सा बन्छ जुन कटौतीबाट बाँच्दछ।
एम्मा एक भावुक लेखक र अतिथि ब्लगर हो। लेखनले उनको ज्ञान, कौशल र विशिष्ट उद्योगको बारेमा बुझाइमा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। उनी लेख्न र आफ्नो ज्ञान अधिकतर फैशन र जीवन शैली उद्योगमा साझा गर्न मन पराउँछिन्। उनी आफ्नो ज्ञान र टिप्स विश्वभर फैलाउन उत्साहित छिन्। लेखन बाहेक, उनी यात्रा, स्टाइलिंग र कुकिंग मन पराउँछिन्। हाल एलिट ग्यारेजका लागि कार्य गर्दैछ जुन प्रदान गर्दछ ग्यारेज मर्मत सेवाहरु.
W तरीका ब्रेक्जिटले ब्रिटिश आयात र ईयुमा निर्यातलाई प्रभाव पारेको छ
ट्विटरले ट्रम्प प्रतिबन्ध स्थायी पुष्टि गर्दछ